Nyochaa: "Ala Nrọ", nke James Nava | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nyochaa: "Ala Nrọ", site n'aka James Nava
Ala ozo Ọ bụ akwụkwọ nke atọ m gụrụ James Nava. Onye nnọchite anya onye mbipụta akwụkwọ ahụ Akwụkwọ sinipa na Spen o nwere obiọma ziteere m ya, ya na akwụkwọ ndị ọzọ ode akwụkwọ. Abụọ n'ime ha, isi awọ Wolf y Onye ọrụ nchebe Agụọla m ha, ma kọọrọ gị echiche m. N'ezie, Ala ozo bu akwukwo nke ise nke Nava. Akụkọ a, nke mepụtara karịa afọ 10, mechara hụ ìhè na 2012.
Ọzọkwa, Nava na-egosi akụkọ na-akpali akpali, nke na-atọ ụtọ, nke na-agbasi ike ma na-akpali agụụ mmekọahụ. Gbanye Ala ozo ọ nweghị ihe efu ma ọ bụ ederede ikpeazụ nke onye edemede. Ma Ala ozo ọ bụ karịa: ọ bụ akụkọ banyere mmụba onwe onye na ịlụ ọgụ megide nsogbu, dị ka Nava kwuru na ihe ikpeazụ e kwuru n’elu. Ọ bụkwa akụkọ na-etinye ụkpụrụ dị mkpa dịka ọbụbụenyi, iguzosi ike n'ihe, nganga, idu ndú na ịdọ aka ná ntị ule. E wezụga akwụkwọ ikikere edemede nke onye edemede were, akwụkwọ ọgụgụ a abụghị naanị akwụkwọ iji nwee obi ụtọ n'ịgụ akwụkwọ: ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ iji tụgharịa uche.
1 Akụkọ banyere imeziwanye onwe gị na ịlụso nsogbu ọgụ
2 Onye na-eyi ọha egwu ga-eche ihu
3 A na-agụ na-enwe
Akụkọ banyere imeziwanye onwe gị na ịlụso nsogbu ọgụ
Ala Nrọ na-akọ akụkọ banyere ndị egwuregwu abụọ, Tim Bradock na Samantha Davis, bụ ndị ndụ ha na-agbakọta n'oge kachasị njọ nke ndụ ha, ọkachasị maka ya. Ọ bụ skater na ọ bụ onye na-eme egwuregwu. Ha abụọ nwere otu nrọ ahụ: ọla edo Olympic. Ha gbalịsiri ike iji kwadebe iji nweta ihe ha kpebiri.
Otú ọ dị, ndụ na ọdịnihu chọrọ itinye ihe mgbochi yiri nke a na-apụghị imeri emeri. Mgbe ha zutere, Samantha gbakere site na nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ ọ na-amaghị ma ọ ga-eme ka ọ laghachi azụ na skating na arụmọrụ kachasị elu. Ihe mmerụ a bụ nsonazụ nke ezigbo nsogbu ya: akwara na asọmpi.
Ihe Tim dị ntakịrị karịa. Tupu asọmpi n'egwuregwu Olimpik, ndị na-eto eto na-eto eto nwere ihe mberede okporo ụzọ. Ọ dịghị onye na-enye gị olile anya karịa ịnọ n'oche nkwagharị ruo oge ndụ gị niile.
Tim na Samantha nọ n'ụlọọgwụ nke naanị otu dọkịta nyere ha olileanya iji gbakee site na mmerụ ahụ ha. N'oge a, akụkọ na-ejikọta ọnụ. Ha na-alụ ọgụ iji mee ka nrọ ha mezuo, na-agbasi mbọ ike, ndidi na ihe mgbu, na-adabere na ibe ha.
Onye na-eyi ọha egwu ga-eche ihu
Ma di na nwunye ahụ na-agba mgba abụghị naanị ịlụ ọgụ iji merie nsogbu anụ ahụ ha, na nke Samantha, nsogbu mmụọ. Ọtụtụ iyi ọha egwu na-eyi ha egwu nke mere ka ha pụta ìhè maka ịnọchite anya ụkpụrụ mba niile. Ha nwere ike ịhọrọ: ịwepụ ma zere iyi egwu ahụ ma ọ bụ ịlụ ọgụ maka nrọ ha ma nwee ntụkwasị obi na ndị ọrụ nchekwa ga-edozi ọnọdụ ahụ nke ọma.
Ọ bụrụ na ejiri ihe kọwaa akwụkwọ akụkọ James Nava, ọ bụ site na mbuli elu nke ụkpụrụ ịhụ mba n'anya. Nke a, nke siiri ndị na-abụghị ndị America ike nghọta, ejirila nke ọma na akụkọ a nke mere ka m nwee agụụ maka ụdị mmụọ na mmụọ a.
Nava na-ekpughe ọzụzụ ya na ahụmịhe ndị agha mgbe ọ na-eche esemokwu ndị na-eyi ọha egwu, na-abanye n'ụdị nkọwa ọ bụla: usoro nke ndị agha nchekwa, usoro nke ndị na-eyi ọha egwu nke Alakụba, ngwa agha, atụmatụ ndị agha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
A na-agụ na-enwe
Akụkọ a na-enweta mmetụta nke nta nke nta. Nke nta nke nta ọ na-eyiri ma na-ejide. Nkọwa, omume na mmetụta uche na-ejikọta ọnụ dị iche iche, nke ziri ezi maka oge ọ bụla.
N'ime akwụkwọ akụkọ ahụ, anyị nwere ike ịchọta nkọwa na-egbukepụ egbukepụ, nke na-emikpu anyị na akụkọ ahụ ma mee ka anyị nwee ọ enjoyụ n'akụkụ uche ise. Ihe nkiri ahụ dị egwu. Anaghị m ekwu maka naanị ndị na-eme iyi ọha egwu. Nazọ Nava si emekọ ihe egwuregwu bụ ihe na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọ andụ na ịgụ akwụkwọ ugbu a, ma n'otu oge ahụ na-akpali akpali, ị ga-ahụ n'anya Ala ozo.
Ị nwere ike zụta Ala ozo ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nyochaa: "Ala Nrọ", site n'aka James Nava
Otu n'ime edemede edemede
"Ọ bụ ezie na mmiri ozuzo na-ezo", nke Teresa Viejo, atụmatụ aghụghọ nke jupụtara n'ihe omimi